Style, Image | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Style, sary
Fomba fanesorana ny hoso-doko amin'ny pataloha jeans: dingana an-dàlana
Rehefa nandoto ny pataloa ankafizin'izy ireo tamin'ny loko, dia maro no diso hevitra fa afaka manary azy ireo soa aman-tsara ianao. Ireo tena mamoy fo indrindra dia manapa-kevitra ny hanao fohy amin'izy ireo, raha mamela azy ny haavon'ny toerana. Fa, minoa ahy, ity koa ...
Kiraro fanaovana kiraro ho an'ny ankizy sy ny lehibe: habe, ny fomba hisafidianana
Ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana ny kiraro dihy mety dia tsy azo ambara. Ny olona mandihy matihanina dia mahatakatra tsara an'io. Mba hahatratrarana ny fifehezana dia mila mandany ampahany manan-danja amin'ny fotoanany amin'ny fiofanana izy ireo. Ary raha tonga lafatra ...
Akanjo vehivavy manga - akanjom-baravarana tena ilaina
Hafahafa ihany, fa ny vehivavy dia mijery kanto sy manintona amin'ny fitafian'ny lehilahy. Mazava ho azy, tsy miresaka momba ny singa rehetra amin'ny fitafian'ny ankizilahy na vehivavy isika, fa ny tuksedo amin'ny vatana mitanjaka na ...
Lolita style: famaritana, akanjo
Ny fomban'ny Lolita dia famoronana tany am-boalohany tamin'ny taona 70 izay nalaza nandritra ny am-polony taona maro. I Japon dia heverina ho toerana nahaterahan'ity fironana lamaody ity, izay nitaona ny endrika sasany an'ny Rococo sy Baroque, ary mitovy anarana ...
Inona ny volamena madio? Fitaovana, fanoratana, fitsapana ary vidiny isaky ny grama volamena madio
Tian'ny olona foana ny nandravaka ny vatany tamin'ny kojakoja samihafa. Raha taona maro lasa izay, vakana, rojo, fehin-tànana, kavina ary kavina dia natao ho toy ny vatan'ny fivavahana sy talismans, avy eo ...
Blouse-bodysuit "Silhouette mahafinaritra" ("Avon") - hevitra momba ny mpividy sy ireo manao an'ity blouse ity
Ny blouse tsotra dia tsy mifanaraka tsara amin'ny pataloha jeans, pataloha na zipo. "Bubble" dia miseho amin'ny andilana, izay sarotra iatrehana azy, satria mila manara-maso azy ireo tsy tapaka ianao. Ny tompovavin'ny blouse toy izany dia matahotra ary tsy tapaka ...
Unisex - inona izany? Ahoana no fomba anehoana ny fomba unisex amin'ny akanjo, fofona na kiraro?
Misy hevitra maro samihafa amin'ny tontolon'ny maoderina; ny sasany manjavona tsy ilaina intsony, ny sasany kosa mipoitra. Ity lahatsoratra ity dia mety ho an'ireo izay te-hahafantatra ny teny hoe unisex: inona izany ary ...
Anorak Nike dia ho lamaody lamaody foana
Amin'ny lamaody, ny singa amin'ny fanatanjahan-tena matetika dia mitana ny toerana voalohany. Ny palitao jiro na mpamaky rivotra dia teo amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny laharana nandritra ny taona maro. Ny Nike anorak dia niditra haingana teo ary ...
Volo (volo vato any Venus). Sary, fananana ary sandany
Ny quartz dia iray amin'ireo vato semi-sarobidy malaza indrindra. Ny lazany dia noho ny hatsarany ary ny vidin'ny mineraly ambany kokoa. Ny iray amin'ireo karazana quartz mahaliana indrindra dia ny volo, vato misy anarana poetika ho an'ny volo ...
Torohevitra momba ny fomba: ahoana ny fomba hitafy bizina
Ny teny hoe "beret" dia mifandray an-tsitrapo amin'ny sarin'ny vehivavy frantsay kanto miaraka amina fehiloha kanto amin'ny volon'izy ireo. Amin'ny lamaody maoderina, izy io dia endrika mampiavaka ny hatsaran-tarehy any Paris, tandindon'ny maha-vehivavy sy fahasarotana. Ary raha vehivavy frantsay no ao ...
Inona no manao longsleeve sy inona ny akanjo anaovana azy?
Izay tsy mahalala hoe inona ny tanany lava dia very be. Rehefa dinihina tokoa, ity zavatra ity dia iray amin'ireo mety indrindra. T-shirt lava vita amin'ny akanjo lava sy malefaka ity ...
Mafy amin'ny flask - fomban-dàlana vaovao Mandrakizay
Ny voninkazo no zavatra voalohany tonga ao an-tsaina rehefa mitady handresy vehivavy ny lehilahy. Mariky ny fitiavam-pitiavana, fitiavam-pitiavana, fitiavana am-pitiavana ary fientanam-po, izy ireo no fanamafisana ny fahatsapana sy ny fisehoan'ny faniriana hampifaly. Rose in ...
"Balenciaga" (ranomanitra): famaritana ny hanitra, mpanamboatra ary hevitra
Balenciaga dia menaka manitra izay loharanom-bola tokana ho an'ny trano lamaody mitovy anarana aminy. Cristobal Balenciaga dia mpilalao couturier manan-talenta namorona akanjo tsara tarehy sy kojakoja malaza. Ny kitapo amin'ity marika ity dia malaza ...
Inona ny lokon'ny khaki amin'ny akanjo?
Vao tsy ela akory izay, ny fomba "miaramila", izay mifamatotra mafy amin'ny loko miloko khaki, dia niverina tamin'ny lamaody indray. Fahadisoana ny mieritreritra fa ireo antsoina hoe "miaramila" dia mety amin'ny tovovavy tanora manana ny maha izy azy fotsiny. Satria ...
Izahay dia misafidy hoe aiza ny mividy palitao ambany any Yekaterinburg
Ampy ny mividy palitao midina indray mandeha amin'ny ririnina, satria lasa mpifanaraka amin'ity karazana akanjo ity ianao. Tian'ireo Rosiana ireo mpamonjy voina mafana ireo avy amin'ny toetr'andro mangatsiaka mafy noho ny fahazavany sy ny toetra tsara azo anaovana insulated. Palitao nidina hatry ny ela ...
Candice Swanepoel: ireo mariky ny tarehimarika, ny subtleties amin'ny makiazy sy ny fiainam-piainan'ny modely (sary)
Ny tontolon'ny lamaody dia orinasa amina miliara dolara isan'andro. Mitifitra ho an'ny magazine, mampiseho fanangonana vaovao, mamolavola fironana vaovao, mahita mpaka sary ary olana maro hafa dia manahy ireo mpamorona, mpamorona lamaody, tonian-dahatsoratra ...
Iza no orinasa hividy akanjo ririnina amin'ny ririnina? Akanjo ririnina manao oram-panala
Vao haingana izay, nanjary lamaody be ny mandany ny fialan-tsasatry ny ririnin'izy ireo ivelan'ny trano. Raha talohan'izay dia aleon'ny mponina ao amin'ny firenentsika trano milay rehefa ririnina, isaky ny taona ...
Pabrikan'ny volom-borona "Kalyaev": hevitra momba ny vokatra
Na eo aza ny zava-misy fa ny lamaody dia vehivavy manana endrika miovaova, ny akanjo volom-borona voajanahary tsara tarehy dia ho zava-misongadina amin'ny fitafiam-behivavy. Tsy azo tanterahina ny maka sary an-tsaina akanjo tonga lafatra kokoa izay sady manafana no ny toetranao ...
Ahoana ny hitafy palitao fanjaky ny lehilahy?
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny toetr'andro mangatsiaka, ny filàna akanjo ivelany tsara tarehy sy mafana dia tsapa tsy mbola nisy toy izany. Ny safidy tsara indrindra ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy dia palitao. Ity entana ity dia efa voafidy efa ela ho ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 42 Next Page
52 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,457.